News Collection: करिश्मा हैनन उत्कृष्ट अभिनेतृ
करिश्मा हैनन उत्कृष्ट अभिनेतृ
करिश्मा मानन्धरलाई ‘सेक्सी’ र ‘सदाबहार सुन्दरी’का रुपमा तारिफ नगर्ने कमै होलान् । उनका समकक्षीदेखि नयाँ अनुहारसम्मले करिश्माको ‘करिश्मा’माथि प्रश्न उठाउने हिम्मत गर्दैनन् ।
तर, कतिपयले भने करिश्मालाई उत्कृष्ट अभिनेतृ मान्न नसकिने तर्क गर्छन् । ‘अहिलेसम्म करिश्माले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको एउटै पनि एवार्ड पाउन सकेकी छैनन’- उनकीहरुको तर्क छ ।
करिश्माले २५ बर्ष नेपाली सिने क्षेत्रमा बिताइन, एक सयभन्दा बढि सिनेमामा अभिनय गरिन् । धेरै सिनेमा ब्यबसायीकरुपमा सफल पनि भए । अवार्डलाई नै सफलताको कसी मान्ने हो करिश्मालाई उत्कृष्ट अभिनेतृ कसरी मान्ने ?
उत्कृष्ट अभिनेतृको सम्मान पाउन नसकेको कुरा कता कता करिश्मालाई पनि बिझेको रहेछ । ‘सायद मेरो भूमिका अवार्ड पाउने खालका थिएनन् होला ।’- मानन्धरले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
धेरै सफल चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा देखिएकी करिश्मा एवार्डको कसीमा किन कमजोर देखिइन त ? त्यसको कुटनीतिक जवाफ दिएकी करिश्माले आफ्नो समयमा अधिकांश उत्कृष्ट एवार्ड गौरी मल्लले पाएको स्मरण गरिन् । त्यसपछि जल शाह र निरुता सिंहले पनि त्यस्तो अवार्ड थाप्ने सौभाग्य पाए । तर करिश्मालाई भने त्यस्तो अबसर कहिल्यै जुरेन् ।